ko htike's prosaic collection: တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ရေး ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် စဉ်းစားကြည့်ခြင်း
Posted by ကိုထိုက် at 10:09
Tin Win said...
(၁) စစ်တပ်မှာ ရာထူး၊ လုပ်သက်အလိုက် ဦးစီးချုပ်၊ ဒုဦးစီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်သူတွေ ဥပဒေအရ ရှိပြီးသားပါ။ ဦးသန်းရွှေ စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက် ဘာဥပဒေနဲ့ ဦးစီးချုပ်လုပ်ပြီး လခယူနေရတာလဲဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေရော စစ်တပ်ထဲမှာပါ မေးခွန်းထုပ်လာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ ဥပဒေအရ တရားဝင် ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ရမယ့်သူ သူ့တာဝန်သူထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဦးသန်းရွှေကို ဖယ်ရှားအရေးယူဖို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြရပါမယ်။
ဥပဒေကြောင်းအရ တရားမဝင်တဲ့ ဦးစီးချုပ်နဲ့ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာတွေမှန်သမျှဟာ၊ တရားမဝင်ကြောင်းကို ကမ္ဘာ့အစိုးရတွေ၊ မီဒီယာတွေသိအောင် ပြည်ပကမြန်မာသံရုံးတွေမှာ ဆန္ဒပြအသိပေးရပါမယ်။
နောက်ဆုံး ဦးသန်းရွှေ ဥပဒေချိုးဖေါက်၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီး ရာထူးလုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူထုအုံကြွ ဆန္ဒပြတာ၊ စစ်တပ်ပုန်ကန်တာဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။
(၂) မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးတွေ၊ သွေးတွေ၊ မျက်ရည်တွေ၊ အသက်တွေနဲ့ ရင်းထားတဲ့ မြန်မာပြည်ပိုင် ငွေကြေး၊ စီးပွါးဥစ္စာတွေကို ယူအေအီးနိုင်ငံကို သယ်ထုပ်ပြီး ဦးသန်းရွှေတို့မိသားစု သူဌေးလုပ်စားဖို့ စီစဉ်ထားတာတွေကို စစ်တပ်ထဲမှာမေးခွန်းထုပ်လာအောင်၊ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စစ်တပ်ကစစ်ဆေးအရေးယူလာအောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်ချရပါမယ်။
(၃) သူတို့မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်သမျှသတင်းတွေကို လက်ခံယူမယ့်လိပ်စာ စီစဉ်ရပါမယ်။ သူတို့မိသားစုဓါတ်ပုံတွေကို တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေထံ ဖြန့်ဝေထားရပါမယ်။
(၄) နိုင်ငံတိုင်းမှာ သိလိုသူတွေကိုရှာဖွေထောက်လှမ်းပေးတဲ့ အေဂျင်စီတွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဈေးနှုန်းကအစ စုံစမ်း၊ မှတ်တမ်းတင်ထားရပါမယ်။
ကိုထိုက် စီစဉ်တော့ (ဇော်ထွန်း)
21 May 2009 at 12:25
yes, we need paparazzo.
I totally agreed with Ko htike. We must do with together.
We want democracy..at First we do with peace ...but Our older people were dead..Monk also.... Now We need careful Ourself with living and get Democracy..We need to tell soilder with mouth or hand ...choose one..Remember Our country history...Grand grand father fight English and Japan to get independent....Now we need to do like this...